Uphando (Research) -Electrical and Electronic Engineering | Stellenbosch University
Home › Uphando (Research)
Kukho amacandelo aphambili ezophando ngaphakathi kwesebe kwaye nophando lwenziwa ngentsebenziswano esondeleleneyo namashishini asekuhlaleni kwakunye nabalingane bamazwe ngamazwe.
IElekthroniki & uzibuthe woMbane
Ukwenziwa kweMiqondiso & ukuFunda koMatshini
Icandelo lweeSistim zeKhompyutha noLawulo liqhuba imisebenzi yophando okusisiseko ngaphakathi kwiLebhoretri yeSistim zoMbane (i-ESL). I-ESL yindawo yokuzalwa ye-SUNSAT, isathelayithi yokuqala yaseMzantsi Afrika. Yaba likhaya kuphando kwakunye nemisebenzi yophuhliso eyahlukeneyo ye-NRF Innovation Fund kwakunye neeprojekthi ze-dti THRIP. Uphando kweli candelo lujolise ubukhulu kwimfundo ngentshukumo kwakunye nolawulo iplatfom ezilawulayo umz. Iisathelayithi zasemhlabeni ezantsi, i-manned and unmanned fixed ne-rotary wing aircraft, iimoto zangaphantsi kwamanzi njl.
Uphando ngeesistim zamandla ombane lujolise ngokubanzi ekuphehleni, ukusasaza, uguqulo kwakunye nolawulo lwamandla ombane, ukuquka amandla ahlaziwayo. Abahlohli abathandathu abaqeshwe ngokupheleleyo benza icandelo laMandla oMbane kwakunye, bedibene noko nenani eliphezulu labafundi abasele benaso isidanga sokuqala, bazibandakanye kolu phando. Izibonelelo eziquka, phakathi kwezinye izinto, iiLebhoretri ezinkulu ezintathu zodidi lomhlaba zophando koomatshini abanamandla aphezulu kakhulu ombane ne-elekthroniki. Uvavanyo lungenziwa kwezi Lebhoretri kumandla kwakunye namandla ombane kumaqanaba afika ku-3 MW kwakunye no-400kV ngokwahlukeneyo.
Uphando kwiisistim zamandla ziquka umsebenzi wokubumba i-wideband kwakunye noqikelelo bobuninzi obungantshintshiyo kwimeko yesistim yamandla ngokusebenzisa isistim ezichongwa kubuchule. Ukwenziwa kwesixhobo semilinganiselo yokuchongwa kwesistim ye-wideband waveforms kwiisitim zokusasaza zevoltheji ephezulu zenza inxenye yolu phando. Njengomzekelo wento eyenziwayo, iqela elikhulu leeyunithi ezinkulu zejenereyitha zisandul’ ukuvavanyelwa iinjongo zochongo lwe-modelling and parameter ngokubambeneyo neKhomishini yokuBonelela ngoMbane yaseMzantsi Afrika (uEskom). Indlela iilowudi zombane ezimodelwa ngayo ibalulekile kuhlahlelo, umsebenzi noyilo lweenethiwekhi zesistim yamandla ombane, ngokungakumbi kwiindawo zasemaphandleni. Ukulowudwa kwe-modelling nobuntunu-ntunu belowudi yevoltheji yohlahlelo lwesistim yamandla ombane kufumana ingqwalaselo enkulu kuphando olungesistim yamandla ombane.
Uvavanyo lokusebenza kwentambo zombane ezinqanda umbane ungadluli ezenziwe ngemichako eyahlukeneyo kwimimandla engcolileyo lwenza inxalenye ebalulekileyo yophando lwevoltheji ephezulu. Umzekelo, cyclo-aliphatic insulators zobude obungalinganiyo zenziwe zanamandla kwisistishi sokuvavanya esingaseluxwemeni ukujonga ukwenzeka kokungcoliseka.
Iziguquli zamandla ombane zidlala indima ebalulekilelyo ekuguquleni nasekulawuleni amandla ombane. Uphando ngamandla enzululwazi ngesutswana elinesitsali-mbane elijikeleza umbindi we atom, ajolise ekuphuhliseni nasekulawuleni kobuchule bokuguqula amandla amatsha enzululwazi ngesutswana elinesitsali-mbane elijikeleza umbindi we atom, kwakunye nokusetyenziswa kwawo. Lento iquka uphando kwiziguquli ezikwizigaba ezininzi, iziguquli ezonga imali ze AC ukuya kwi AC, isinye ukuya kwisithathu zeziguquli zenqanam kwakunye neziguquli ze-matrix. Ukusetyenziswa kwezi ziguquli kuziifiltha ezisebenzayo, ulawulo lwevoltheji, uguqulo lohlaziyo lwamandla ombane kwakunye nokufakwa kombane emaphandleni. Umzekelo yi-3kV yefiltha esebenzayo/isixhobo sokudala esincedayo esitsalayo esisandul’ ukwakhiwa.
Uphando kwiidrayivu noomatshini bombane kujolise kukuyilwa okona kulungileyo kwakunye no lawulo olusisigxina lwesitsalane, ukonqena/kwala kwakunye ukwenziwa kwezixhobo zokuqhuba zomatshini ukuba zibe nombane ngokuzisondeza kwezinye ezinombane kwakunye nesistim zomashini abenza umbane.Ukuyilwa okona kulungileyo balemitshini luphumelela ngokusebenzisa igcalulo yesiqalelo esingenasiphelo kwakunye nokusetyenziswa ngcono kwee-algorithms.Oomatshini abenza umbane abanesigxina sesitsalane esitsha ayilwe kwaye andiswa, umzekelo, ukusetyenziswa kwamandla ahlaziyiweyo ngqo neesixhobo zokuqhuba esifana nomoya, i-hydro kwakunye namandla amaza. Ufundo bobude besibonelelo samandla anikezwa yinjini yokutsala umbane ye-Stirling iye yaqaliswa kutshanje. Enye into uphando elujongise kuyo zisistim zezixhobo zokuqhuba zokuhambisa umbane, esinjenge-in-wheel drives zeemoto zombane. Imoto yombane enxuseneyo yebhastile ibisandula kwakhiwa kwaye yavavanywa. I-Position sensorlesscontrol, kwakunye nolawulo olunenkuthalo olukokona kulunga kwakha inxalenye efunekayo yophando lwezixhobo zokuqhuba.
Imisetyenzana yophando iquka iinkalo ze-iianthena nokusasaza, iimethodi zamanani zokusombulula iingxaki ezintsokothileyo zefildi zikazibuthe wombane, iisistim zemayikhroweyivu kunye nezixhobo, i-RADAR, imvano zikazibuthe wombane kunye neesekethi zokunikezela umbane.
Le misetyenzana yophando yecandelo ifumana inkxaso yezezimali esuka kwa-NRFkunye neenkampani ezininzi kwicandelo labucala. Umthombo obalulekileyo othile wokuxhasa ngezezimali ngusihlalo wophando we-SKA SARCHI.
ICandelo loKwenziwa kweMiqondiso (elikwathanda ukubizwa njengeCandelo le-DSP umbulelo omkhulu ekuthambekeleni kwalo ekusombululeni iingxaki ngamanani) lisebenza kwiinkalo ezahlukeneyo eziquka ukusetyenziswa kwemiqondiso ethwele ulwazi. Icandelo liquka zombini abo bantu baziincutshe ekugqithisweni kwemiqondiso enjalo ngemigama emikhulu (uQhagamshelwano ngeefowuni) kwanangeenethiwekhi ezintsokothileyo (iThiyori yeNethiwekhi), kwanabo bantu banomdla ekucaphuleni nasekufakeni ulwazi kumqondiso – nokuba yidatha yamanani (uQhagamshelwano lwamanani neMidiya) okanye imiqondiso eqhelekileyo yasehlabathini njengentetho (uKwenziwa kweNtetho) kwakunye nemifanekiso (uKwenziwa kweMifanekiso).
Umtyeleli okhangela ukufumana iLabhoretri ye-DSP yeCandelo loKwenziwa kweMiqondiso uyakhuthazwa ukuba alandele ivumba elimnandi lekofu yefiltha edidiyelwe ngokuhlaziyekileyo, into ebasela abaphandi bethu abangama-30 abenza izidanga zesibini kwiilabhoretri zethu ezixhotyiswe ngokulungileyo. Ngenxa yokuba abaphandi bethu abaninzi bequkeka ekusetyenzisweni kolwazi, inkalo yomsebenzi ephambili yinethiwekhi yekhompyutha enkulu esebenzisa i-Ubuntu Linux. Icandelo elikwalondoloze iilabhoretri ezintathu ezincinanana zezixhobo zobungcaphephe nophuhliso lwehadiwe. Amalungu amahlanu efakhalthi asebenza ngokusisigxina ongamela umzamo wophando.